Maraykanka oo ciidamadooda kala baxaya dalka Soomaaliya | XOG-DOON NEWS - Breaking News From Somalia
Home Wararka Maanta Maraykanka oo ciidamadooda kala baxaya dalka Soomaaliya
Maraykanka oo ciidamadooda kala baxaya dalka Soomaaliya
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa qorsheynaya in dalka Soomaaliya uu ka saaro ciidamada Maraykanka ah ee ku sugan haatan.
Donald Trump ayaa u sheegay la taliyaashiisa sarein uu doonayo in ciidamada Maraykanka uu ka saaro si uu u fuliyo ballanqaadyadiisii uu hore ololaha doorashada ugu galay ee ahaa in dib uu ugu soo celinayo ciidamada Maraykanka dalkooda.
Wasaarada Gaashaandhigga Maraykanka ayaa diyaarinaysa qorshe hordhac ah sida lagu daabacay wargeyska Bloomberg waxaana arrinta loo xil saaray la taliyaha dhinaca ammaanka ee Madaxweynaha Maraykanka Robert O’Brien,xoghaya gaashaandhiga Mark Esper iyo Madaxa taliyaasha ciidamada Maraykanka Mark Milley.
Ciidamo Maraykan ah oo tiradoodu u dhexeyso 650 illaa 800 askari oo ay ku jiraan ciidamo gaar ah oo caawiya kuwa dowlada Soomaaliya ayaa ku sugan dalka Soomaaliya,iyagoo ugu yaraan dhammaantood la geeyay Soomaaliya xilligii uu talada hayay Madaxweyne Trump.
Previous articleC/casiis Lafta Gareen “Kuraasta dadka qaar ku fadhiyaan waa looga xaq leeyahay”
Next articleQM oo maanta soo saartay war la xiriira qaraxii Zoobe